पाल्पा, १३ फागुन – सेना दिवसका अवसरमा चण्डीप्रसाद गण पाल्पाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
गणले तानसेन टुँडिखेलमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । दमकडा माविमा अध्ययन गर्ने दृष्टिविहीनलाई खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरुलार्य एक छाक भोजन गराएको छ ।
तानसेन टु“डिखेलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी गरी १६ पिन्ट रगत संकलन भएको चण्डीप्रसाद गणले जनाएको छ । संकलित रगत लुम्विनी मेडिकल कलेजमा रहेको ब्लड बैंकमा पठाइएको चण्डीप्रसाद गणका मेजर मनोज डंगोलले बताउनुभयो ।
सेनाले दमकडा माविमा अध्ययन गर्ने ३० जना दृष्टिविहिन विद्यार्थीलाई खेलकुदका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । गणपति दीर्घबहादुर चन्द, मेजर मनोज डंगोलले छात्रछात्राहरुलाई क्रिकेट खेल्नका लागि व्याट र स्टम्प हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । खेलकुदमा रुचि राख्ने छात्रछात्राले विद्यालय परिसरमा क्रिकेट खेल्ने अभ्यास गरिहेका छन् ।
पाल्पा महोत्सव २०७३ को तानसेनमा उद्घाटन गर्दै उहाँले देशमै प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने भएकाले विदेश जाने मानसिकता त्याग्न आग्रह गर्नुभयो । गभर्नर डा. नेपालले पछिल्लो मौद्रिक नीतिमार्फत् उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा चाहिए जति कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुत्पादक क्षेत्रहरुको लगानीमा नियन्त्रण गरिएको छ । व्यक्तिगत सुविधाका गाडी, घर तथा घडेरी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल दिन सकिंदैन ।’
गर्भनर डा. नेपालले भन्नुभयो, ‘जसले जति माग्यो, उसैलाई पैसा दिएका कारण अहिले यो तरलताको अवस्था आएको हो ।’ वितेको ६ महिनाको अवधिमा ४ सय २८ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको उहाँको भनाई थियो । गभर्नर डा. नेपालले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास एवम् आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायीहरुले लगानीको वातावरण अझै बन्न नसकेको बताएका थिए ।
महोत्सवको मुख्य आकर्षणको रुपमा कर्णेल उजिर सिंह थापाको पूर्णकदको शालिक, राउटेद्वारा निर्मित सामाग्रीहरुको प्रदर्शनी, टर्की र अष्ट्रिज चरा, फोटो प्रदर्शनी तथा कृषिजन्य सामाग्रीहरुको उत्पादन प्रदर्शनी रहेको छ ।
पाल्पा, माघ ४– सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा भीरबाट खस्ने ढुङगा रोक्न ‘रकनेट’ नमुना प्रविधी जडान सुरु गरिएको छ ।
सिद्धबाबा क्षेत्रको चट्टाने पहिरो रोकथाम नमूना परियोजना अन्तर्गत सिद्धबाबा र दोभान बिचमा रक नेट (जाली) प्रविधी जडान गर्न थालिएको हो । प्रति घण्टा एक सय किलोमिटरको गतिमा आएको १ टनको ढुङ्गा रोक्ने रकनेट प्रविधी जडान सुरु गरिएको भूगर्भविद् इन्जिनियर डा. रञ्जन दाहालले बताउनुभयो । नमूना परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत यो नेट एक सय २० वर्ग मिटरमा चार मिटर उचाई र २७ मिटर चौडाईमा फैलिनेछ । जाली अड्याउनको लागि ड्रिलिङ्ग मेसिनले चारदेखि आठ मिटरसम्मको प्वाल बनाउने काम भैरहेको छ ।
नेपाल सरकार सडक विभागको समन्वयमा जियोटेक सोलुसन्स इन्टरनेशनल प्रालीले मंसिरदेखि फागुन मसान्तसम्मको चार महिना अवधिमा एक हजार किलो जुल रहेको ओमेगा नेट जडान कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम आरम्भ गरेको छ । कुल ५२ लाखको लागतमा यो नमूना रक नेट प्रविधि सुरु गरिएको भूगर्भविद् डा. दाहालले जानकारी दिनुभयो । यो परियोजनाको साझेदारका रुपमा त्रुमर सुचबाउतेन, अष्ट्रिया र हिमालय कन्जर्भेशन ग्रुप नेपाल रहेका छन्, जसले नमूना प्रविधिका लागि सामाग्री र प्रविधिमा सहयोग गर्ने छन् । सिद्धबाबा सडक क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष जस्तो पहिरो खसेर सडकमा गुड्ने गाडी तथा यात्रीलाई बगाउने गरेको छ ।
सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरो खसेर वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएकाले एउटा विकल्पका रुपमा यो रक नेट जडान कार्य पहिलो पटक परीक्षण गर्न लागेको पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,–‘मानवीय र भौतिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न परीक्षण गर्न लागिएको छ । नमूना कार्यले सफलता पाएमा आगामी वर्षदेखि अन्य स्थानहरुमा सरकारले नै यो कार्य अगाडी बढाउने छ ।’ पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद रहेका पाण्डेले यस सडक खण्डको सुधारका लागि धेरै विकल्पहरुको खोजी भएको र तत्कालका लागि रक नेटिङ्गको परीक्षण गरिएको बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा सुरुङ्गमार्ग एवं अर्ध सुरुङ्गमार्गका लागि पनि अध्ययन अनुसन्धानको काम भइरहेको सांसद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सडकको लागि रकनेट प्रविधि नेपालमा नमूना कार्य भएता पनि माथिल्लो तामाकोशी हाईड्रोपावरमा ६ करोडको लागतमा रक नेटिङ्ग प्रविधिबाट काम गरिएको जियोटेक सोलुसन्सले जनाएको छ ।
ढुंगा,गिट्टीको चोरी निकासी रोक्न एलडिओ खोलामा
माघ १, पाल्पा – जिल्ला विकास समिति पाल्पाले बिना अनुमति ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन तथा ढुवानी गरिरहेका सवारी साधनलाई जरिमाना गरेको छ ।
पाल्पाका विभिन्न नदी, खोला तथा निजी जग्गाबाट अनुमति बिना ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन तथा ढुवानी गरिरहेका डोजर, टिप्पर, ट्रयाक्टरलाई पक्राउ गरी जरिमाना गराइएको स्थानीय विकास अधिकारी राम प्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो दिनुभयो । एलडिओ आफै खोलामा अनुगमनका लागि पुगेपछि चोरी निकासी गर्नेहरु त्रसित भएका छन् । रानीघाट, दरपुक, दैलातुङ, अर्गली, रुप्से, कसेनी, माडी फाँट, स्याउली बजारलगायतका स्थानबाट बिना अनुमति नदीजन्य पैदावार बोकेका सवारी साधन पक्राउ परेका हुन् । स्थानीय विकास अधिकारी राम प्रसाद पाण्डेयका अनुसार जिल्ला विकास समितिले ढुंगा र गिट्टी चोरी गर्ने गाडीबाट करिव सवा ६ लाख जरिमाना असुल गरेको छ ।
ठेक्का नलगाइएका नदी र खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र वालुवा मनपरी उत्खनन् भइरहेको छ भने निजी जग्गामा गह्रा सुधार, खेत सम्याउने, घडेरी खार्ने भन्दै विना स्वीकृति ढुंगा निकासी गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । कतिपय व्यवसायीले अनुगमनकारी निकायलाई छुट्टै रकम दिएर मिलाएको बताउने गरेका छन् । अनुगमनका बेला पुगेका सरकारी अधिकारीसँग व्यवसायीले सामाजिक कामका लागि हो भनेर पनि उम्किने गरेका छन् । निजी जग्गाबाट हालसम्म ढुंगा रोयल्टी वापत ७ लाख ६० हजार मात्र उठेको देखिन्छ ।
ढुंगा, गिट्टी र वालुवा चोरी निकासी भइरहेको भन्ने समाचार प्रसारण भएपछि स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृतसहितको कर्मचारी टोलीले दिउँसो तथा रातीमा समेत अनुगमन गस्ती बढाएको छ । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा तानसेन करिडोरका निर्माण व्यवसायीले ९० हजार, रानीघाट सडकका ठेकदारले १ लाख २० हजार, कालीगण्डकी करिडोरका ठेकदारले ५० हजार रुपैँया जरिमाना तिरेका छन् । माडी रुप्से क्षेत्रका ढुंगा व्यवसायीले १ लाख ३० हजार , दरपुक, अर्गली, दैलातुङ र स्याउली बजारमा गैरकानुनी रुपमा ढुंगा बोक्ने ट्रयाक्टर व्यवसायीले १०\_१० हजार रुपैँया जरिमाना बुझाएका छन् । योजना अनुगमन तथा प्रसासकीय अधिकृत चुरामणि बस्यालले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न आफूहरु प्रत्यक्ष अनुगमनमा हिडिरहेको र पटकपटक चोरी गर्नेहरुको गाडी सिज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्ने बताउनुभयो ।
यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा जिल्ला विकास समिति पाल्पाले विभिन्न शिर्षकबाट कुल १ करोड ७८ लाख आन्तरिक आय संकलन गरेको छ । आन्तरिक आयश्रोत व्यस्थापन गर्न सक्ने हो भने पाल्पाले विकास बजेटका लागि केन्द्रकै मात्र मुख ताक्न नपर्ने विशेषज्ञहरु बताउछन् ।